बाइक र भवन सफ्टवेयर सवारी गर्न सिक्दै | Martech Zone
बाइक र भवन सफ्टवेयर सवारी गर्न सिक्दै
मंगलवार, मार्च 27, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
काम हालसालै एउटा वास्तविक चुनौती भएको छ। एक उत्पादन प्रबन्धक हुनु एक आकर्षक काम हो - जब तपाइँ वास्तवमा त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ कि यो फिक्रीको कुरा हो तर तपाईं साँच्चिकै केन्द्रीय केन्द्र हुनुहुन्छ एक चलिरहेको टग'ए युद्धमा बिक्री, विकास, ग्राहक सेवा र कम्पनीमा नेतृत्वको साथ युद्ध।
केहि व्यक्तिले तथ्यलाई वेवास्ता गर्दछन् कि उद्देश्य अधिक सुविधाहरू वा अर्को शान्त वेब २.० अनुप्रयोग निर्माण गर्ने होइन, उद्देश्य भनेको मानिसहरूलाई उनीहरूको काम अझ प्रभावकारी, र अधिक कुशलताका साथ सशक्त बनाउनु हो। हरेक दिन मलाई सोधिन्छ, "अर्को विमोचनमा के सुविधाहरू छन्?"
म प्रश्नको जवाफ शायद नै दिन्छु किनकि मेरो ध्यान बिल्कुल सुविधाहरूमा केन्द्रित छैन, मेरो ध्यान भनेको त्यस्तो समाधान निर्माण गर्ने हो जुन मार्केटर्सलाई उनीहरूको काम अधिक प्रभावकारी र अधिक प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईका ग्राहकहरुलाई सशक्त पार्नु भनेको के हो। यदि तपाईं ठुलो र चम्किलो कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग ठूला र चमकदार चीजहरू छन् कुनै ग्राहकहरूले यसलाई प्रयोग नगरी।
गुगल एकल पाठ बाकसको साथ सुरू गरेर साम्राज्य निर्माण गर्‍यो। मैले केहि लेखहरू पढेको छु जहाँ याहू! उनीहरूको उपयोगितामा वास्तवमा गुगलको आलोचना भएको छ। एक पाठ बाकस भन्दा राम्रो उपयोगिता के हो? मलाई गलत नबनाऊ, याहू! तिनीहरूको अनुप्रयोगहरूमा केहि शानदार सुविधाहरू निर्माण गर्दछ। म बिल्कुलै उनीहरूको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस कम्पोनेन्टहरूलाई माया गर्दछु, म उनीहरूको अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दिन।
गुगलले कसरी बाइक चलाउने मानिसहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दछ, र त्यसपछि उनीहरूले बाइकलाई सुधार गर्ने कार्य जारी राख्छन्। एकल पाठ बाकसबाट अधिक कुशल खोजीहरू निर्माण गरेर, गुगलले करोडौं मानिसहरूलाई उनीहरूको कामहरू अझ राम्रो गर्न सशक्त बनायो। यो काम गर्‍यो, र त्यसैले सबैले यसलाई प्रयोग गर्छन्। यो राम्रो थिएन, यसमा ग्लैमरस होमपेज थिएन, तर यसले उनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूलाई दक्ष र प्रभावकारी ढ work्गले काम गर्न सशक्त बनायो।
के तपाईं १ rear-स्पीड माउन्टेन बाइकमा पछाडि दृश्य ऐना, सals्केत, पानीको जग, आदि राख्दै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं गर्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईं किन एक सफ्टवेयर अनुप्रयोग निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ जुन १--स्पीड, ऐना, संकेत र पानी जग छ? तपाईंले गर्नु हुँदैन। यसको उद्देश्य भनेको उनीहरूले बाइक चढ्न सिक्नु पर्छ ताकि उनीहरू पोइन्ट A बाट बिन्दु B सम्म पुग्न सक्दछन्। जब बिन्दु A देखि पोइन्ट B जटिलतामा बढ्छ, त्यस्तै तपाईंलाई नयाँ कार्यक्षमता भएको बाइक चाहिन्छ जुन यसलाई समर्थन गर्दछ। तर मात्र जब प्रयोगकर्ता वास्तवमा यसलाई सवारी गर्न सक्छ!
यसको मतलब तालिम पाels्ग्राहरू महान छन् (हामी यिनीहरूलाई विजार्डको रूपमा देख्छौं)। एक पटक प्रयोगकर्ताले वास्तवमा बाइक चलाउन सक्दछ, त्यसपछि तपाईं प्रशिक्षण पा whe्ग्राहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। जब प्रयोगकर्ता बाइक चलाउन महान हुन्छ र यसलाई छिटो सवारी गर्न आवश्यक पर्दछ, तब यसमा केही गियरहरू राख्नुहोस्। जब प्रयोगकर्तालाई अफ-रोड चालू गर्न आवश्यक छ, तिनीहरूलाई माउन्टेन बाइकको साथ सेट अप गर्नुहोस्। जब प्रयोगकर्ता ट्राफिकमा जानेछ, ऐनामा फाल्नुहोस्। र ती लामो सवारीहरूको लागि, पानी जगमा फाल्नुहोस्।
गुगलले यसको सफ्टवेयरमा प्रगतिशील रिलिजहरू र लगातार सुधारको साथ गर्दछ। मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि उनीहरूले मलाई केहि साधारण चीजको साथ अंकुश लगाए र त्यसपछि उनीहरूले यसमा थप गर्न जारी राखे। उनीहरूले पाठ बक्सको साथ सुरू गरे, त्यसपछि तिनीहरूले छवि कुरा, ब्लग खोजी, कोड खोजी, गुगल गृह पृष्ठ, गुगल कागजातहरू, गुगल स्प्रिडशिटहरू जस्ता अन्य चीजहरू थपे ... जसै म तिनीहरूको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अभ्यस्त भएको छु, उनीहरूले सुधार गर्न जारी राखेका छन्। यसले थप प्रक्रियाहरू समर्थन गर्दछ जसले मलाई मेरो कार्य अधिक प्रभावकारी र अधिक कुशलतापूर्वक गर्दछ।
बाइक भनेको विन्दु A बाट बिन्दु B लाई देख्ने व्यक्ति हो। उत्तम बाइक निर्माण गर्नुहोस् जुन सवारी गर्न सजिलो छ, पहिले। एक पटक उनीहरूले कसरी बाइक चलाउने सिक्छन्, त्यसपछि चिन्ता गर्नुहोस् कि कसरी तपाईंको अनुप्रयोगमा नयाँ कार्यक्षमता निर्माण गरेर थप प्रक्रियाहरू समर्थन गर्ने बारेमा।
याद राख्नुहोस् - गुगलले साधारण पाठ बाकसको साथ सुरू गर्‍यो। म तपाईंलाई वेबमा द्रुत गतिमा बढ्दो अनुप्रयोगहरू र सफल व्यवसायहरूमा एक नजर लिन चुनौती दिनेछु र तपाईं ती सबैको लागि एउटा अद्वितीय विशेषता पाउनुहुनेछ ... ती प्रयोग गर्न सजिलो छन्।
कामको लागि बन्द ...
समाचार पत्रहरू मरेका छैनन्, बिक्री समाचार मरेको छ
तपाईंलाई 500०० औं खुशी हुनुहोस्!
मार्स 28, 2007 मा 9: 33 एएम
शानदार पोस्ट! विशेष गरी समानता मन पर्यो।
मलाई लाग्छ कि उत्पादन प्रबन्धकहरूले आजकल के मा कठिनाई छ भनेर ठ्याक्कै परिभाषित गर्दै छन् अतिरिक्त "बाइक" सुविधाहरूको लागि सही समय कहिले हो र तिनीहरूलाई पहिले नै अवस्थित सुविधाहरूमा कसरी प्लग गर्ने जुन तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्।
अप्रिल 2, 2007 मा 2: 15 PM
महान पोस्ट डग। धेरै चीजहरू जुन यति राम्रो देखिन्छ कि वास्तवमा कामलाई गाह्रो बनाउँछ। पुस्तक "किन सफ्टवेयर बेकार" वा "कोडमा सपना देख्नुभयो"?
दुबैले कसरी सफ्टवेयरलाई शान्त वा अति लचिलो बन्ने प्रयास गरेर मात्र काम सरल रूपमा गर्न खोज्दा बर्बाद हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छन्।
अप्रिल 2, 2007 मा 3: 34 PM
धन्यवाद, क्रिस! म एक तरिकामा यो पाठ तपाईंप्रति ऋणी छु। तपाईंले निर्माण गर्नुभयो सटीक लक्ष्य सफ्टवेयर निर्माण को सिद्धान्त मा प्रयोगकर्ताहरूको लागि र बस समस्या समाधान। म तपाइँको अर्को कम्पनी संग स्टोर मा के छ हेर्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दिन, कम्पेन्डियम!